March 2017 – Radio KeyFM
Marsabit : EACC oo Baaraysa Saraakiil lagu tuhunsan yahay Iibsashada Gargaar loogu talagalay Dadka Abaaruhu saameeyeen
27th March 2017	Somali Language 0
Hay’da anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa EACC ayaa baaritaan ku haysa cunto gargaar ah oo lagu xaday degmada Loyangalani ee kowntiga Marsabit. Madaxa EACC ee kowntiyada Isiolo,Tharaka Nithi, Meru, Marsabit iyo Samburu Ignatius Wakesa ayaa sheegay in ay baaritaan ku hayaan saraakiil sar sare oo maamulka,kuwaasi oo lagu tuhunsan …
Knec oo Been Abuur ku tilmaamntay Shahaadada Dugsiga Sare ee Gubernatoore Hassan Joho
Gudiga imtixaanada qaran ee Kenya (Knec) ayaa warqad ay jawaab ahaan ugu celisay madaxa laanta dambi baarista ugu sheegtay in Hassan Joho ay been abuur tahay warqadiisa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare. Waxaa suurta gal ah in uu ku waayo tartanka gubernatooraha Mombasa hadii la xaqiijiyo shahaadooyinkiisa Jaamacadeed in aysan …
Labo Qof oo ku dhintay Shil ka dhacay Narok
Ilaa labo qof ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay aaga Stima oo ku taala wadada weyn ee isku xirta Narok ilaa Maimahui. Shilkan ayaa dhacay fiidnimadii Axada,iyada oo ay qayb ka ahaayeen gaadiid nooca xamuulka ah iyo bas matatu-ah. Dadka dhaawacmay ayaa loo qaaday cisbitaalka kowntiga. Taliyaha booliska …
Labo Qof oo ku dhintay Dagaalo kasoo cusboonaaday Baragoi
20th March 2017	Somali Language 0
Ilaa Labo qof ayaa ku dhintay Baragoi,kadib markii uu dagaal cusub dhexmaray bulshooyinka Turkana iyo Samburu. Taliyaha booliska Samburu Alfred Ageng’o ayaa ku baaqay in la dajiyo xaalada,waxaana uu digniin u diray kuwa lagu tuhmayo dambiyada deegaanka ka dhacaya ee dhaca Lo’du ay ku jirto. Mr Ageng’o ayaa sheegay in …
Boolis Loo xiray Laaluush ay ka qaateen Itoobiyaan
Ilaa shan kamid ah saraakiisha booliska saldhiga Karatina Police Station ee kowntiga Nyeri ayaa la xiray,kadib markii ay sii daayeen 17 qof oo soo galooti sharci daro ahaa. Dadka lasii daayay ayaa la sheegay in ay ka yimaadeen Itoobiya. Dadkan Itoobiyaanka ayaa saarnaa gaari xamuul,waxaana la sheegay in ay kusoo …
Dhimasho ka dhalatay Xoolo raacato ku dagaalamay Isiolo
Tobon qof ayaa ku dhintay Kom,kadib markii ay dagaalameen xoolo raacato kasoo jeeda bulshooyinka Borana iyo Samburu. Taliyaha booliska Isiolo Charles Ontita ayaa xaqiijiyay shilka. Ku xigeenka gudoomiyaha amaanka Merti Julius Maiyo ayaa sheegay in ay jiraan dad lu dhaawacmay dagaalka oo subaxnimadii Axada dhacay. My Maiyo xusay in ay …
Dowlada oo Baaraysa Xisaabaadka Bangi ee Gubernatoore Hassan Joho
Gubornatooraha kawntiga Mombasa Hassan Joho ayaa lagu wargaliyay in lacagta u taala bankiga dabagal iyo baaritaan dowlada ay ku sameeyneyso ayadoo u mareeysa waaxda ururisa canshuurta. Waaxda canshuur arurinta dalka ee loo soo gaabsho KRA ayaa waxa ay warqad horaantii bishan u gudbisay Bangiga Diamond Trust oo xisaab lacageed uu …
DHAGAYSO Mandera : NDMA oo Quudin u samaynaysa Xoolaha ay Saameysay Abaarta
15th March 2017	Somali Language 0
Maamulka maaraynta musiibooyinka qaran ee magacooda loo soo gaabiyo NDMA ayaa qaybo kamid ah kowntiga Mandera waxaa ay ka sameeyeen quudin xooloaha ay abaaruhu saameeyeen. Sidoo kale xoolalayda ayay ka taageerayaan sidii ay u iibin lahaayeen xoolohooda wakhtigan abaarta,ayna lacagtooda wakhti barwaaqada uga faa’iideysan lahaayeen. Isku duwaha NDMA Mandera Hussein …
Senator-ka Isiolo Oo Ku Eedeeyay Saraakiil Kowntiga Xaditaanka Dhaqaalaha Dadweynaha
Senator-ka kowntiga Isiolo Mohamed Kuti ayaa ku eedeeyay qayb kamid ah saraakiisha sare ee kowntiga in ay ku kobcinayaan noloshooda adeegsiga dhaqaalaha dadweynaha. Dhaqaalihii ay ahayd in lagu horumariyo bulshada ayuu sheegay senator-ku in ay ku samaysanayaan dhismooyin qaali ah,saraakiisha kowntiga. Hadalkan ayuu ka sheegay munaasabad uu cunti ku qaybinayay …
Koonfurta Baringo : Shan Qof oo ku Dhintay Weeraro Cusub
Ilaa Shan qof ayaa ku dhintay,labo kalana waa ay ku dhaawacmeen weeraro cusub oo ka dhacay xuduudka Kiserian iyo Mukutani ee Koonfurta Baringo,maalinkii shalay. Shanta qof ee dhintay ayaa isugu jiray saddex rag ah iyo labo dumar ah. Weerarka koowaad ayaa la’aaminsan yahay in ay gaysteen burcad kasoo jeeda bulshada …